Laba Tareen oo Guul ah, 11 Dhimatay 70 Ku Dhaawacmay Pakistan | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya92 PakistanLaba tareen ayaa ku soo duulay Pakistan, 11 ayaa dhintay 70
11 / 07 / 2019 92 Pakistan, Aasiya, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, DUNIDA, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah
laba qof oo bas ah oo ay ku dhaawacmeen Pakistan
Magaalada Sadikabad, koonfurta Punjab ee dalka Pakistan, ayaa haweeney 1 11 waxaa la dilay, wax ka badanna 70 ayaa ku dhaawacmay shilkii ka dhashay tareenka rakaabka iyo tareenka xamuulka. Hawlgallada samatabbixintu waxay sii wadaan kooxaha gurmadka, ayaa ku dhawaaqay kororka tirada dhimashada iyo dhaawaca.
Shilka ayaa dhacay intii lagu jiray dukaanka Ketta-Lahore ee tareenka Akbar Express horaantii subaxnimadii. Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu ku dhuftay tareenka tareenka ee sugaya tareenka Walhar Train Station, kaas oo ku socday.
Bilayska Gobolka ayaa ku dhawaaqay in 1 ay ahayd haweeney iyo in 70 uu ahaa ilmo dhaawac ah. Dhaawacyada ayaa loo gudbiyay isbitaalo kala duwan oo ku yaal gobolka si loogu daaweeyo. Bilayska ayaa sheegay in hijtoriga hydraulic loo adeegsaday in laga saaro meydadka laga soo riday tareenka, halkaas oo hawlgalka samatabbixinta uu sii socdo si aan kala go 'lahayn. Waxa jira dhaawacyo ka badan shilka.
Cabasho ayaa la siin doonaa dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shilka tareenka, mucaaradka dalka ayaa sanadkii la soo dhaafay shilkii tareenka 5, ka dalbaday in shaqada laga cayriyo Wasiirka Tareenka ee Pakistan Sheekh Rashiid Axmed.
Raysul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan, war saxaafadeed ku saabsan warbaahinta bulshada ayaa ka qoomameeyay shilka. Doonida dilka kuwa qaraabada ah ee ku dhintay shilkan, Khan ayaa waydiistay in baadhitaan degdeg ah lagu sameeyo dhacdada.
Laba Tareen oo dhulka hoostiisa mara oo laga raaco Mexico 1 ayaa dhintay 41 Dhaawacmay
Warbixinnada Daariiqda Waxsoosaarka Gawaarida Guryaha ee Konya
Saldhigga Gebze Darıca Metro waxay ka shaqeynayaan Horumar